The iTunes ụlọ ahịa a maara nke ọma n'ihi na ya nnukwu collection nke music. Na n'elu 43 nde music tracks ọ bụ eleghị anya ndị kasị ibu n'ụwa. Kasị ịtụnanya ihe otú ọ na-arụ ọrụ seamlessly na gị iPod, iPhone ma ọ bụ a na kọmputa.
Mgbe na-eche otú i nwere ike ibudata media ọdịnaya na iTunes? Ọ bụ n'ezie mfe. Iji nweta ihe ọ bụla na iTunes, ihe mbụ mkpa ka i nwere bụ ihe Apple ID. Ọtụtụ ndị mmadụ na ina kere mgbe ịtọlite ​​ngwaọrụ ma bụrụ na ọ bụghị kere, Apple enye ihe dị mfe nzọụkwụ site nzọụkwụ guideline na-esi eme nke a. Ozugbo i nwere otu akaụntụ i nwere ike na-amalite ịzụ. Isiokwu a ga-eduzi gị na otú ibudata songs on iTunes for free.
1. Olee otú ibudata songs on iTunes si iCloud
2. Olee otú mmekọrịta songs on iTunes si iPhone / iPad
3. Olee otú Download Songs on iTunes si Internet iji TunesGo
Olee otú ibudata songs on iTunes si iCloud
iCloud bụ ihe online nchekwa na a ígwé ojii Mgbakọ ọrụ mepụtara Apple Inc. Na ọzọ okwu ọ bụ ihe online ọrụ na-enye otu ịkọrọ ọmụma na media ọdịnaya n'etiti a na kọmputa, ihe iPhone, ihe iPad na ipad aka. Music zụrụ site iTunes nwere ike mfe ike ibudata ọ bụla ipad, iphone ma ọ bụ iPod site na iCloud nchekwa ọrụ. Iji download songs on itunes si iCloud, nanị na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
• Mwepụta iTunes na-aga "iTunes ụlọ ahịa".
• banye na gị Apple id na pịa "zụrụ" na n'akụkụ aka nri nke window.
• Mgbe ịbanye na ị ga-ahụ gị niile zụrụ ihe na gị iCloud akaụntụ. Họrọ udi nke 'Music' wee pịa "ọ bụghị na m na ọbá akwụkwọ". All music na iCloud nke bụ na kọmputa a ga-ahọrọ.
• Pịa na ígwé ojii button mgbe song iji ibudata ya na iCloud gị iTunes. Ị nwere ike pịa "ibudata niile" bọtịnụ na nri ala ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ nke songs.
• Ugbu a, ị ga-enwe ike ịhụ ihe niile music nke a na-zụrụ site na gị na adịghị ugbu a ibudatara na itunes.
Olee otú mmekọrịta songs on iTunes si iPhone / iPad
Ọ bụ ezi echiche iji mmekọrịta gị iPhone / ipad na iTunes na a mgbe niile. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-azụ music eji gị iphone syncing agbakwụnye a media gị na kọmputa. Ò nwetụla mgbe ị na-eche otú i nwere ike iji iTunes ka mmekọrịta ozi na gị iPhone? Syncing songs on itunes si iphone bụ a dị mfe usoro nke na-agụnye ndị na-esonụ:
• Mepee iTunes ma hụ na ị nwere ndị ọhụrụ version.
• Jikọọ iPhone / iPod gị na kọmputa na iji eriri USB
• Na Ihuenyo, chọta ejikọrọ ngwaọrụ.
• Mgbe ịpị na njikọ IOS ngwaọrụ, taabụ ga-egosi na n'aka ekpe nke iTunes window n'okpuru ntọala ka e gosiri n'okpuru.
The taabụ na ga-apụta bụ nanị maka ọdịnaya na bụ dị na ejikọrọ ngwaọrụ itunes Ọbá akwụkwọ, n'ihi na ihe atụ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị ihe nkiri na gị ọbá akwụkwọ, fim taabụ agaghị apụta.
• Tụgharịa na syncing. Iji gbanye syncing, pịa na ọdịnaya ụdị eg music, photos wdg na mgbe ahụ ego na igbe ọzọ ka mmekọrịta. Ka ịgbanyụọ syncing, uncheck igbe.
• Iji mmekọrịta gị na ọdịnaya, pịa mmekọrịta button na ala nri akuku nke ihuenyo.
Syncing gị iPhone / iPad na iTunes pụkwara mere site n'iji Wi-Fi. Iji mee otú ahụ na-esonụ usoro ga-agbasoriri:
• Jikọọ gị iPhone / iPad na kọmputa site n'iji eriri USB.
• Chọpụta ngwaọrụ gị na pịa ya. Ọ bụrụ na ị na-na iTunes ụlọ ahịa, ị kwesịrị ị na-ahụ ya na elu nri akuku.
• Na nchịkọta taabụ, họrọ na enweta na "mmekọrịta na ngwaọrụ a n'elu Wi-Fi"
• Mgbe IOS ngwaọrụ na kọmputa na-ejikọrọ na otu netwọk, na IOS ngwaọrụ ga-egosi na iTunes na ị pụrụ mmekọrịta ya.
• Họrọ ngwaọrụ, mgbe ahụ, pịa 'mmekọrịta' ka mmekọrịta ndị IOS ngwaọrụ.
Olee otú Download Songs on iTunes si Internet iji TunesGo
Wondershare TunesGo bụ a software omume nke na-enyere otu jikwaa ọdịnaya nke IOS ngwaọrụ na iTunes n'ọbá akwụkwọ. Ò nwetụla mgbe ị na-eche otú i nwere ike ibudata songs on iTunes n'aka gị tube? TunesGo nwere ike inwe ya mere na nanị otu click. Kasị ịtụnanya akụkụ bụ na ị pụrụ inwe album na music mkpado na-akpaghị aka nke software ga-eme maka gị. Ka ibudata songs on iTunes n'aka gị tube, soro mfe nzọụkwụ depụtara n'okpuru:
• Mwepụta TunesGo.
• Na ndabara homepage, pịa 'ị tube ka iTunes'
• Pịa iTunes na akara ngosi na ọrụ mmanya, ndị depụtaghachiri URL ga-akpaghị aka-pasted na TunesGO.
• N'okpuru ị tube ka iTunes, pịa 'Download' ọ ga-akpaghị aka na-amalite nbudata. Mgbe download zuru ezu, music ga-converted MP3, kwukwara album na music na mkpado ma atụkwasịkwara "Ị tube" downloads "playlist na iTunes.
Get nkọwa ndị ọzọ >> Download music Site YouTube / weebụsaịtị ka iTunes
TunesGo nwekwara ike-eji maka ndị ọzọ media management ọrụ dị ka ebufe music si iTunes ka ngwaọrụ, mwube ndabere ụzọ maka faịlụ kpọfere iTunes, na-ekere òkè iTunes playlist, nhicha iTunes Ọbá akwụkwọ na-ebufe music si PC / MAC ka ngwaọrụ. Ụfọdụ n'ime Uru metụtara iTunes agụnye:
• Ọ na-eme ihe aga-eme otú ahụ dị ka importing na exporting dị mfe.
• Ọ nwere ike iṅomi n'etiti otutu ngwaọrụ.
• Dị media na kachasị gị IOS ngwaọrụ.
• Mgbe ị na-adịghị ihe iTunes azụ elu, ọ na-enye a ọnụ ala ma na a odi mfe ụzọ iji weghachi media si gị IOS.
• Easy mbupụ videos na ndị ọzọ na ọdịnaya site na gị IOS ngwaọrụ ọ bụla na nchekwa.
All Ụzọ Nyefee iTunes ka ọzọ Computer
Olee otú ka Wepụ Duplicates si iTunes
Esi ọcha Up Music Library
Olee otú Ịgbanwe iTunes Skin
> Resource> iTunes> Olee otú Download Songs on iTunes